Lalao 10 sy fampiharana maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (11 Janoary) | Vaovao IPhone
Lalao sy fampiharana 10 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (11 Janoary)
Azo antoka fa tianao ny hahazo lalao sy fampiharana maimaim-poana izay aloa tahaka ahy koa; Toy ny zava-mahadomelina izy io, amin'ny lafiny tsara indrindra, satria indraindray tsy maninona na mahasoa kokoa antsika izy io, ny zava-dehibe dia ny manararaotra ny tolotra ary avy eo, ho hitantsika. Androany izao dia averiko aminao indray ny lalao sy fampiharana maimaimpoana ho an'ny iPhone sy iPad.
Aza adino fa ireo tolotra rehetra hasehoko anao eto ambany ireo dia Fotoana voafetraMidika izany fa azoko antoka ihany fa miasa izy ireo amin'ny fotoana famoahana ity lahatsoratra ity, saingy tsy fantatsika hoe mandra-pahoviana no hananan'izy ireo hery satria tsy ampitan'ny mpandrindra izany. Noho izany, raha misy lalao na fampiharana mahaliana anao dia mihazakazaha mitady azy, ary azonao atao ny manombatombana raha avelanao izy io na hamafa azy amin'ny fitaovanao.
1 Anatomy paosy
2 Stepr - Trackometer pedometer & Fitness
3 Sketchpad Pro: Notepads sy Pads Sketch
4 Crop Video
5 Adika 2 ho an'ny Safari
6 Moon Mamba
8 Timer avy amin'i Alto - Ora fiasana firaketana, fanarahana làlana ary fisoratana
9 SpeakFrench 2
10 Horonan-tsary Rocket ho an'ny Google Cast sy Chromecast amin'ny fahitalavitra
Anatomy paosy angamba izany ny fampiharana tsara indrindra ananantsika anio atolotra, saingy tsy hampiala voly ny tenako miaraka aminy aho satria i Ignacio mpiara-miasa amintsika dia manazava tsara lavitra noho izaho eto.
Pocket Anatomy dia mamaritra indray ny tena dikan'ny fampandraisana andraikitra ny mpampiasa amin'ny atiny fanabeazana ara-pahasalamana. Ny rindrambaiko anatomika feno nahazoantsika loka, namboarina tamim-pahamendrehana ary misy atiny sivy misy musculoskeletal, neurovascular ary taova anatiny, misy teny 100.000 fitaovana fianarana.
Ny vidiny mahazatra an'ny Anatomy paosy 14,99 euro izy izao nefa azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra. Ny maharatsy azy fotsiny dia amin'ny anglisy ihany fa na eo aza izany dia mamporisika anao aho hampidina azy, mieritreritra fa raha adika amin'ny teny espaniola amin'ny fanavaozana manaraka dia efa azonao izany.
Stepr - Trackometer pedometer & Fitness
Stepr dia a pedometer mifanaraka amin'ny iPhone 5s mandroso ary ahafahanao mametraka tanjona vaovao hanatsarana ny fahasalamana sy ny fahasalamana. Izy io koa dia manana antontan'isa feno ary mampiasa ny coprocessor an'ny hetsika M7 ka hanisa ny tsirairay amin'ny dingana rehetra tsy mila manahy momba azy io.
Ny vidiny mahazatra an'ny Stepr 0,99 euro izany nefa izao azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra.
Sketchpad Pro: Notepads sy Pads Sketch
Araka ny asehon'ny anarany dia miatrika a pad nomerika feno ho an'ny iPhone sy iPad Amin'izay dia tsy afaka mandray an-tanana ny fanamarihantsika rehetra fotsiny isika, fa manao sary ihany koa. Manana sehatr'asa, fiasa ary fiasa an-taonina maro izay azonao atao izao ny manadihady sy manararaotra maimaimpoana.
Ny vidiny mahazatra dia 2,99 euro, kanefa izao dia azonao atao maimaim-poana tanteraka izany, mandritra ny fotoana voafetra.
Drawing Pad Promaimaim-poana
Crop Video dia fampiharana tsotra mamela anao haingo haingana sy mora ny horonan-tsary; safidio ny ampahany tianao indrindra ary tapaho izay tsy tianao. Voatahiry ao anaty fampirimana manokana ireo horonan-tsary vaovao ary azonao zaraina amin'ny Instagram, Facebook, Youtube, Flickr, Vimeo na amin'ny mailaka.
Ny vidin'ny Crop Video mahazatra 2,99 euro izany nefa izao azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra.
Crop Video€ 3,49
Adika 2 ho an'ny Safari
Ity fampiharana ity dia miasa ho a fanitarana safari amin'ny iOS izay mandika sy mamaky mafy ny atiny rehetra amin'ny pejin-tranonkala.
Ny vidiny mahazatra an'ny Adika 2 ho an'ny Safari 4,99 euro izany nefa izao azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra.
Adika 2 ho an'ny Safari€ 5,49
Ny vidiny mahazatra an'ny Moon Mamba 0,99 euro izany nefa izao azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra.
Moon Mamba€ 1,09
Un fandraisam-peo miaraka amin'ny sivana marobe. Ny vidiny mahazatra an'ny XVideo 1,99 euro izany nefa izao azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra.
Timer avy amin'i Alto - Ora fiasana firaketana, fanarahana làlana ary fisoratana
Ny vidiny mahazatra an'ny Timer avy amin'i Alto 1,99 euro izany nefa izao azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra.
Hanara-maso sy faktiora miaraka amin'i Alto€ 2,29
Ny vidiny mahazatra an'ny SpeakFrench 2 4,99 euro izany nefa izao azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra.
SpeakFrench 2 (14 French Text-to-Speech)€ 5,49
Horonan-tsary Rocket ho an'ny Google Cast sy Chromecast amin'ny fahitalavitra
Ny vidiny mahazatra an'ny Horonantsary Rocket 1,99 euro izany nefa izao azonao atao maimaim-poana tanteraka, mandritra ny fotoana voafetra.
Rocket Video Cast€ 2,29
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao sy fampiharana 10 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (11 Janoary)
Activator, Flipswitch ary FlipControlCenter dia azo alaina ho an'ny iOS 10 amin'ny beta
Podcast 8x17: Manomboka amin'ny 2017 miaraka amin'ny fanantenana tsara